Kala sareynta wadamada Afrika si ay ganacsi u sameeyaan | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
10-ka dal ee ugu fiican Africa inay ganacsi sameeyaan
Jose Manuel Vargas sawir-haye | | Negocios
Sanadkasta Bangiga Adduunka waxay daabacdaa warbixin ay ku muujineyso dalalka ugu fiican adduunka ee ganacsi laga sameeyo. Sannadkii 2013-kii, illaa 185 dal ayaa la baaray, iyagoo ka warqaba in horumarinta suuqyadooda iyo qawaaniinta Dowlad kasta ay si togan u saameyn ku yeelanayaan kobaca dhaqaalaha. Markan waxaan la harnay tobanka wadan ee ugu fiican Africa ganacsiga.
Mauritius waxay gashay kaalinta 19aad adduunka oo dhan iyo kaalinta XNUMXaad ee Afrika. Jasiiraddani waxay ku saleysan tahay ganacsigeeda adeegyada maaliyadeed, dalxiiska, qaybta dharka iyo sonkorta. Hadda waxay culeys gaar ah saareysaa tikniyoolajiyadda iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Waa wax lala yaabo in dastuurkeedu uusan tilmaamayn inuu leeyahay af rasmi ah, sidaas darteed ayaa looga hadlaa Ingiriis ama Faransiis.
2.- Koonfur Afrika
Qeybaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha Koonfur Afrika waa soosaarida gawaarida, tikniyoolajiyadda, macdanta, iyo dalxiiska. Koonfur Afrika ayaa sanadihii ugu dambeeyay casriyeysay caadooyinkeeda isla markaana sifeeyay waraaqo badan oo la xiriira dhoofinta iyo soo dejinta.
Dhaqaalaha Tunisia waa mid aad u kaladuwan maadaama ay ku tiirsan tahay dalxiiska, beeraha, iyo wax soo saarka batroolka. Sannadkii 2009-kii waxaa loo tixgeliyey inuu yahay midka ugu tartamaya dhaqaalaha Afrika, inkasta oo sannadkan la soo dhaafay waxqabadkiisu aad hoos ugu dhacay.
Rwanda waxay kujirtaa booskan mahadnaqa kobaca degdegga ah ee dalxiisku kuhayo dhaqaalaheeda. In kasta oo xasuuq ba'an uu dhacay labaatan sano ka hor, dhacdadani mar dambe saameyn kuma yeelan jawiga ganacsigooda. Waxay ku jirtaa lambarka 52 ee adduunka.
Heerka kobaca ee Botswana waa midka ugu sareeya adduunka. Dhaqaalaheeda wuxuu ku saleysan yahay macdanta dheeman iyo biraha qaaliga ah, in kasta oo sanadihii la soo dhaafay ay Dowladdu sidoo kale kor u qaadeyso warshadaha kale Tani waxay sababtay in soo dejinta iyo dhoofintu ay aad u koraan 2013 dalka.
Ghana waxay ku guuleysatay booskan iyada oo ay ugu wacan tahay dhoofinta ay ka sameysay macdanta warshadaha, kookaha iyo qaybaha dahabka. Dhaqaalaha dalku wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay dalxiiska, tafaariiqda, iyo saliida. Caalamku wuxuu kujiraa lambar 64.
Sidaad qiyaasi karto, dalxiisku waa isha ugu weyn ee dakhliga Seychelles. Qeybaha kale ee muhiimka ah waa beeraha, kaluumeysiga iyo beerashada qumbaha iyo vanilj. Sannadkii 2012-kii waxay gashay kaalinta 74-aad ee adduunka oo dhan iyo 2013-kii waxay kor u kacday laba meelood oo ay gashay kaalinta 72-aad.
Dhaqaalaha Namibia wuxuu ku saleysan yahay macdanta, wax soo saarka, iyo dalxiiska. Waxaa la yaab leh, tobanka waddan ee ugu fiican ee ka ganacsada Afrika, waa tan kaliya ee lumisay jagooyin adduunka oo dhan. Waxay ka tagtay 81 sanadkii 2012 ilaa 87 sanadkii tagay.
Dhaqaalaha Zambia waxaa had iyo jeer lagu xusaa beeraha iyo macdanta laga qodo. Si kastaba ha noqotee, sanadihii ugu dambeeyay Dowladdu waxay kobcisay dalxiiska, macdanta dhagaxaanta iyo korantada korantada.
Kobaca ugu sarreeya ee dhaqaalaha Morocco wuxuu ka dhacay 2013 isgaarsiinta, warshadaha dharka iyo qaybaha dalxiiska. Sidoo kale way fududaanaysaa waxayna u baahan tahay waraaqo yar si looga bilaabo ganacsiga wadankan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Negocios » 10-ka dal ee ugu fiican Africa inay ganacsi sameeyaan
Tobanka magaalo ee aadka ugu hanjaba masiibooyinka dabiiciga ah